Shiinaha Warshad Wadnaha Wadnaha Weelka HT70 iyo soosaarayaasha | Jiahua
Habka ： Weelka Wadnaha
Cabbir ： 65x60x10mm
Awood ： 70ml
Dhumucdiisuna ： 0.05mm
Xirxirida ： 20000pcs / kartoon
Cabbirka Ctn ： 615x315x615mm
waxaan haynaa noocyo kala duwan oo digsi keeg ah, gobolo kala duwan waxay leeyihiin caado isticmaalka kala duwan, sidaa darteed waxaan awoodnaa sida ku xusan shuruudaha macaamiisha, waxaan u furi karnaa caaryada.
Allwin Pack waxay isticmaashaa alaabta ceyriinka ah ee dhamaantood la jaan qaadaya heerarka caalamiga ah ee deegaanka, dhamaantood waa heerka cuntada.Waxaan dhisnay iskaashi muddo dheer ah oo aan la yeelanay macaamiisha ka kala yimid Waqooyiga Ameerika, Yurub, Japan, Australia, Aasiya iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha, dukaamada waaweyn, adeegga cuntada iyo cuntada. soo saarayaasha.
Sawirka Sawirka Shayga No. HT70
Xirxirida 20000pcs / kartoon
Cabbirka Ctn 615x315x615mm
Weel aad u yar oo quruxsan oo qurux badan oo qaab wadne qaas ah loo qaabeeyey, kuna fiican maalmaha gaarka ah iyo xafladaha
Kuleylka kuleylka wanaagsan. Miisaan khafiif ah laakiin adag, xoog ku filan baahida dubista
Naqshad la tuuri karo, iska tuur digsiyadan oo uma baahnid inaad ka walwasho xoqidda iyo nadiifinta
Ku habboon alaabada yar ee la dubay sida kuus, jelly, cupcake iyo dhammaan noocyada shaqsiyadeed
Waa maxay sababta Aluminium bireed?
1. Keydiyaha kheyraadka.
Foornada aluminium ee codsiyada baakadaha iyo cabitaanka waxay keydineysaa ilo ka badan inta looga baahan yahay wax soo saarkeeda. Qiimaynta Kala Duwan ee Wareega Nolosha (LCAs) waxay muujineysaa in baakadaha alufoil iyo waraaqaha guryaha lagu shubo ay gacan ka geystaan ​​wax ka yar 10% saameynta deegaanka ee wareegga nolosha ee badeecada - Soosaarka iyo isticmaalka joogtada ah.
2. Ka hortagga caqabadda
Caqabada guud ee aluminium ee xayiraadda iftiinka, gaasaska iyo qoyaanka ayaa ah sababta ugu weyn ee loo adeegsado laminates jilicsan ee cuntada, cabitaanka iyo codsiyada farsamada. Xitaa marka aad u khafiif ah waxay bixisaa difaac kaamil ah iyo ilaalinta caraf iyo sifooyinka wax soo saarka. Waxay kaa caawin kartaa inaad kordhiso nolosha wax ku oolka ah ee alaabada xasaasiga ah bilo badan, xitaa sannado, si buuxda u xafidaya udgoonka asalka ah. Iyada oo suurta gelineysa in alaabada la keydiyo muddo dheer iyada oo aan loo baahneyn qaboojiye, baakadaha aluminium ee aluminiumku waxay gacan ka geysaneysaa kahortagga burburka waxayna keeni kartaa keyd tamar badan.
Si kor loogu qaado baakadaha aluminium ee aluminium ahaan ujeeddo ahaan, si loo yareeyo wasakheynta deegaanka, si loo dhiso horumar waara, kaarboon hoose iyo ilaalinta deegaanka ee badbaadada oo ah himilo.
1.Badal u noqoshada alaabada balaastigga ah waxay yaraynaysaa wasakhda cad;
Hoos u dhigida saamiga baakadaha ku saleysan warqadaha ee alaabada macaamiisha ee la tuuri karo waxay gacan ka geysaneysaa yareynta xaalufinta dhirta iyo wasakheynta kheyraadka biyaha ee warshadaha warqadaha;
3.In la dhexgeliyo baakadaha aluminium ee dib loo warshadeeyo ilaha bulshada, xaqiijinta wareegga aan dhamaadka lahayn ee kheyraadka aluminium iyo wadada horumarka waara ee dalka. Tani waa mas'uuliyadda kooxdeena, sidoo kale ballanqaad ahaan.
Hore: Weelka Qalabka Wadnaha ee HT02
Xiga: Weelka Qalabka Wadnaha ee HT100
Weelka Qalabka Wadnaha ee HT100
Weelka Qalabka Wadnaha ee HT520